Isithombe sezemidlalo ngeke siphele ngokuphelele uma ukhetha isikhwama noma noma yisiphi isesekeli esingesona lesi sitayela. Ngaphezu kwalokho, lokhu kubonakala kungathandeki, ngezinye izikhathi ngisho nokuhlambalaza. U-Nike wanquma ukunakekela ubuhle besifazane bezemfashini futhi wadala umugqa wezikhwama zemidlalo, okubaluleke kakhulu ekuqeqesheni, emincintiswaneni, kodwa nasekuphileni kwansuku zonke.
Izinhlobo ezihlukahlukene zokukhethwa kwezikhwama zezemidlalo ze-Nike
Okokuqala, kufanelekile ukuphawula ivolumu, izikhwama ezinamandla, ezenzelwe ukuhamba nokuqeqesha. Njenganoma imuphi umkhiqizo walolu hlobo lwezemidlalo, ngenxa yempahla ephezulu, isikhwama sizosebenza isikhathi esingaphezu kwesisodwa. Ngaphakathi komkhiqizo kukhona amakamelo angenawo umoya, okusho ukuthi ngisho nangemva kokulala izinsuku ezimbalwa, izinto zizogcina iphunga elimnandi. Igumbi elikhulu livaliwe ngesivalo esikhulu, esinamakhemikhali ahlanzekile amanzi.
Akunakwenzeka ukudlula yonke isikhwama esaziwayo sezicathulo ezivela ku-Nike. Kuyinto ewusizo kakhulu, i-ergonomic, ikhululekile, uhambo alithathi isikhala esiningi. Ngaphezu kwalokho, sinomumo ohlukile, owuhlukanisa phakathi kweminye imikhiqizo yalo mkhiqizo wezemidlalo. I-polyester ephezulu yekhwalithi inikeza ukumelana okuhle kokugqoka.
Izikhwama zezemidlalo zezinsikazi ze-Nike zibhekwa ngumklamo ombala okhanyayo, ukulungiswa kwemininingwane, ukuklanywa kwemidwebo. Ezinhlobonhlobo kukhona iphakethe langaphakathi lapho izinto zomuntu siqu zizohlelwa khona kalula. Ngaphezu kwalokho, ukusebenzisana kwazo kwenza kube lula ukusebenzisa izesekeli hhayi kuphela ukugcina izinto zezemidlalo, kodwa futhi njengokugqoka nsuku zonke.
I-Nike Belt Bag iyisekeli elisebenzayo futhi elisebenzayo elihambisana kalula nebhokisi lamanzi, i-powder, i-lipstick, ifoni ephathekayo nezihluthulelo. Ungaqiniseka ukuthi isici se-wardrobe ngeke siwile ngesikhathi sokunyakaza. Ngempela, ifakwe i-latch eqinile. Ngaphezu kwalokho, ubude bebhande lungalungiswa.
Isikhwama esikhwameni se-Nike saziwa ngekhwalithi yaso ephezulu yezinto ezibonakalayo, ukuhlanganiswa nokuklanywa okuyingqayizivele. Lapha ungafaka izicathulo, izingubo ngisho nesikhwama sakho sezintandokazi. Ngenxa yokukhwabanisa, okusebenza njengesivinini, isikhwama singavulwa noma sivaliwe ngendaba yamasekhondi.
Ukufunda ukuhlukanisa inkohliso
Ukuphishekela izikhwama zezemidlalo ezivela e-Nike kungaba yisisulu sokukhwabanisa, okuholela ekutheni imali izophonswa emoyeni. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi:
Izihlalo zihlale zihle, akunakwenzeka ukubona izintambo ezinamathele nezinto;
Uma uthenge ukukhiqiza endaweni esemthethweni noma esitolo esicinile, sekuvele kungenzeka ukuthi ivikelwe nge-pseudo-Nike;
kufanele unake ilebula ngaphakathi komkhiqizo: kufanele iqukethe ulwazi mayelana namalungelo obunikazi, ukwakheka, umkhiqizi wezwe.
Kuboshwe ngemikhono emibili
Amagilavu ​​ahlangene ngaphandle kweminwe
Ladies ubukele ukukhanya kwelanga
Izigqoko zesikhumba esinezici
Isongo segolide esesandleni sabafazi - ukuthi ungakhetha kanjani nokuthi yisiphi isandla okufanele usigqoke?
I-Tangle Teezer Comb
Ungakhetha kanjani ukushushuluza kwentaba?
Ukulwa phakathi kuka-Emma Roberts no-Evan Peters
Indoda ethandana noVirgo iziphatha kanjani?
Kungani le mphupho iphupha?
I-Diaskintest noma i-Mantoux?
Ukunyuka komuntu omnyama
Sigcina impilo - ukwelashwa okulula komkhuhlane
Impahla yangaphandle ye-Autumn 2013
Ungaqala kanjani imifino?
I-Beach Fashion - Ama-Tunics 2014
31 into engapheli enomuntu!
I-gastritis engavamile - izimpawu, ukwelashwa
Kodwa nokho bahlangene: izithombe ezintsha zika Kate Hudson noNick Jonas zithinta abezindaba
I-ear mite kubantu
I-Nike Sports Pantants